Tetsuya Kakihara – Cast – MMANIME
Fullmetal Alchemist : Brotherhood (2009) Genres - Action & Adventure, Animation, Drama, Mystery Total Episodes - 64 Review - Fullmetal alchemist ဆိုပြီးအရင်ကလည်း Studio Bones က‌နေ ထွက်ဖူးတယ်ဗျ IMDb မှာလည်း 8.6 ရခဲ့ပေမယ့် Elfen lied လိုပဲ Manga ထက် anime ကရှေ့စောရောက်သွားလို့ ဇာတ်လမ်းနောက်ပိုင်းက manga နဲ့တော်တော်ကိုမတူဘူးလို့ပြောပါတယ် အထူးသဖြင့်ဇာတ်သိမ်းကိုတော်တော်များများအားမလိုအားမရဖြစ်ကြတယ် (ကျနော်ကတော့အဲ့ဒီဇာတ်သိမ်းကိုကြိုက်တယ် ဘာဆက်ဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တွေးရတာမျိုးမလို့) အားသာမရကြတာဆုတောင်သုံးခုရခဲ့တာဗျ Tokyo anime award (2004) မှာ Best screen play Best Voice actor Notable entry သုံးဆုရခဲ့တာပါ အပိုင်းပေါင်း 51 ပိုင်းပါ,ပါတယ် 2009 ခုနှစ်မှာတော့ Studio Bones ကနေ FMA ကို Manga ဇာတ်လမ်းအတိုင်းပြန်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးထုတ်ခဲ့တယ်ဗျ ထွက်မယ်ဆိုတော့ အရင်ဟာက rating လည်းကြမ်းထားတော့မမီနိုင်လောက်ဘူးထင်ထားတာ တကယ်လည်းထွက်လာရောလူကြိုက်အရမ်းများခဲ့တဲ့အပြင် IMDb 9.1 နဲ့ဆုတွေပါရရှိခဲ့ပါတယ် အပိုင်းကလည်းအရင်စီးရီးထပ် 13 ပိုင်းပိုများခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း 64 ပိုင်းထိရှိပါတယ် Animataion movie ...
TMDb: 8.4/10 560 votes
Maid Sama! Kaichou wa Maid-sama! Type : TV Total Episode : 26 Art Type : Comedy, Romance, School, Shoujo Duration : 24 min. per ep. Rating: PG-13 - Teens 13 or older ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ကျောင်းသားကောင်စီရဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရတာ မလွယ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းဟာ ယောက်ျားလေးအထက်တန်းကျောင်းကနေ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ယှဉ်တွဲပညာသင်ကြားရေးကို ကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့။ "နတ်ဆိုးဥက္ကဋ္ဌ" ဆိုတဲ့ နာမည်ပြောင်နဲ့ လိုက်ဖက်စွာပဲ ယောက်ျားလေးတွေအတွက်တော့ စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တင်းကျပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ အာယူဇာဝါ မီဆာကီဟာ သူမကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ အာအီကီဒိုနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြီး အကျင့်ပျက်လုယက်ဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကိုတရားစီရင်ပြီး ဆဲအိကာအထက်တန်းကျောင်းမှ မိန်းကလေးတွေကို မကြောက်မရွံ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်။ အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့အာယူဇာဝါမှာ အကြွေးဆပ်နိုင်ဖို့အတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ သူမရဲ့မိသားစုကိုကူညီနိုင်အောင် အိမ်ဖော်ကဖေးမှာအချိန်ပိုင်းအလုပ်ဝင်လုပ်နေရတဲ့ အရှက်ရဖွယ်လျှို့ဝှက်ချက်ရှိတယ်။ အဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသားတွေနဲ့ ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင်တဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် သူမရဲ့အလုပ်အကြောင်းကို ...
Corpse Party: Tortured Souls Corpse party, tortured souls ....................................... IMDb 7/10ထိရထားတဲ့ ၁၈+animeတကားနဲ့မိတ်ဆတ်ပေးပါရစေ ၁၈+ဆိုလို့ဟိုအခန်းဒီအခန်းတွေပါလို့လို့မထင်ပါနဲ့ ပြတာကြီးတွေကသောက်တမုန်းကြမ်းတမ်းဆိုးရွားလွန်းလို့ကလေးတွေမကြည့်သင့်တဲ့ ၁၈+လို့သတ်မှတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကျနော်သိသလောက်စစချင်းPsPဂိမ်းမှာစတွေ့ဖူးတာပါ ဂိမ်းတအားနာမည်ကြီးသွားလို့Animeဆက်ထုတ်တာလို့ထင်ပါတယ် Animeကလည်း Anotherလိုပဲ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးAnimeဆယ်ကားမှာပါနေဆဲပါ စုစုပေါင်းလေးပိုင်းရှိပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းတပတ်ကိုတပိုင်းတင်ပေးသွားပါမယ် OVAရှိပေမယ့် softsubရှာမရလို့မတင်ဖြစ်ဖို့များပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို တိုတိုတုတ်တုတ်ပြောရရင်တော့ နှုတ်ဆတ်ပွဲလုပ်နေတဲ့ကျောင်းသားတသိုက် ငလျင်လှုတ်တာကြုံရပြီးရုတ်တရက်ပရလောကကမ္ဘာကိုရောက်သွားပါတယ် ဘာကြောင့်ရောက်သွားလဲ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ တပတ်တခါစောင့်မျှော်ကြပါလို့.... P.S. နားကြပ်နဲ့မကြည့်ပါနဲ့ မီးပိတ်မကြည့်ပါနဲ့ တခုခုဖြစ်လျင်တာဝန်မယူပါ (ညိုမင်းလွင်လေသံဖြင့်ဖတ်ရန်) Mystery,Horror Duration.....29:11 min Translated and encoded by Dr.Nyan EPISODE 1 EPISODE2EPISODE3EPISODE 4